WestJet: More flights from Canada to Hawaii this winter | Airline News
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeenqwelo moya » I-WestJet: Iinqwelomoya ezininzi ezisuka eCanada ziye eHawaii kobu busika
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuhamba eCanada • Iindaba Zokuhamba eHawaii • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ze-USA
I-WestJet ibhabha ngaphezulu kweenqwelomoya kunayo nayiphi na enye inqwelomoya yaseCanada eneenkonzo ezongezelelweyo zeDreamliner kunye neenqwelo moya ezintsha ezithe ngqo ezivela eCalgary ziye eKona naseLihue.
I-WestJet ibhengeza ukukhula okukhulu kwinethiwekhi yayo yaseHawaii
Ukuqala kobu busika, iWestJet iya kongeza inkonzo eyi-787 Dreamliner ukusuka eCalgary naseVancouver ukuya eKahului, eMaui.
I-WestJet yongeza inkonzo entsha engapheliyo yeveki ukusuka eCalgary ukuya eKona naseLihue
I-WestJet namhlanje ibhengeze ukukhula okukhulu kwinethiwekhi yayo yaseHawaii, inezinto ezininzi ezinokukhethwa kwi-Dreamliner ukusuka eNtshona Canada ukuya eMaui kunye nenkonzo entsha engapheliyo esuka eCalgary ukuya eKona naseLihue kobu busika. Ngeenqwelo moya ezihamba ngeeveki ezingama-57 ngeeveki kwiindlela ezili-10 ezingamisiyo, iWestJet ibonelela ngenkonzo ethe kratya phakathi kweCanada neHawaii kunayo nayiphi na enye inqwelo moya.
"Ngokunciphisa izithintelo zokuhamba, siyazi ukuba iindwendwe zethu ziceba ukuguqula amaphupha abo okufika kudala elindelwe eHawaii abe yinyani efanelekileyo." utshilo uJohn Weatherill, I-WestJet, IGosa eliyiNtloko lezoRhwebo. "Siye sayandisa inkonzo yethu yasebusika eHawaii ngeepesenti ezingaphezulu kwama-25 ukusuka ngo-2019 ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu ziyakhula kwaye zikwizinto ezifikelelekayo, ezingamisiyo ezivela eNtshona Canada."
Inkonzo entsha ukusuka eCalgary ukuya eKona naseLihue
I-WestJet yongeza inkonzo engapheliyo yokumisa rhoqo ngeveki ukusuka eCalgary (YYC) ukuya eKona (KOA) naseLihue (LIH) ukuqala ngoDisemba. Ngokongezwa kwenkonzo entsha, iWestJet iya kubonelela ngenkonzo kwiindawo ezine zaseHawaii ezingami eCalgary kunye nase-Edmonton.
“Iindwendwe zethu ziyakuthanda ukuthetha aloha kwiinqwelomoya ezongezelelekileyo eziya ngqo kwitropiki eHawaii, utshilo uBob Sartor, uMongameli kunye neCEO, eCalgary Airport Authority. "Sikulungele ukwamkela iindwendwe ezibuyayo zikhuselekile kwikhaya nakwihabhu yaseWestJet kwaye sijonge phambili kulongezo lwasebusika oluqhakazileyo kubantu baseAlbertans nokudibanisa abakhweli abaphuma kweli phondo."
Olunye ukhetho lwe-787 Dreamliner
Ukuqala kobu busika, iWestJet iya kongeza inkonzo eyi-787 Dreamliner ukusuka eCalgary naseVancouver ukuya eKahului, Maui (OGG) ngeenqwelomoya zeeveki ezili-13. Inkonzo ye-WestJet 787 eya eMaui evela eNtshona Canada icwangciswe kakuhle ngokuhamba emini ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zifika eMaui ngenjikalanga, zinexesha lokwenza okuninzi kwizicwangciso zazo. Inkonzo yokutyikitya kwindiza ye-Dreamliner inezitulo ezinokuhlala ngokutya kunye nokuzonwabisa.
"Njengentaka yaseKolea, uninzi lwabantu baseCanada babuyela minyaka le kwiiIhawaii Islands kwiinyanga zobusika," utshilo uDavid Y. Ige, iRhuluneli, eHawaii. “Bayabahlonipha abantu, indawo nenkcubeko, kwaye siyabamkela kwakhona. Ukonyuka kwabahambi bamanye amazwe kunokusinceda ukuba silungelelanise iimfuno zabahlali bethu kunye neendwendwe. UMahalo uye eWestJet ngokusebenzisana norhulumente ukugcina abahlali kunye neendwendwe ngokufanayo bekhuselekile kwaye besempilweni. ”
"Sonwabe kakhulu ngokusungulwa kweendlela ezongezelelekileyo zeWestJet ukuya eHawaii," utshilo uLorenzo Campos, uMlawuli weAkhawunti yeHawai'i Tourism Canada. “Sinqwenela ukubulela iWestJet ngokuba liqabane lethu elithembekileyo kunye nenkxaso yabo engagungqiyo yesiQithi saseHawaii nokwabelana ngaso aloha Umoya kwaye uhlala ulamkela ixabiso laseHawaii le-malama. Sijonge ukwamkela usapho lwethu lwaseKhanada ukuba lubuye kobu busika. ”
Indlela yeWestJet kunye neshedyuli yamaxesha
imarike Ukuphindaphindwa kwe-787 Peak Ukuphindaphindwa kwe-737 Peak eyiyo
ICalgary-Maui 6x ngeveki 1x ngeveki Novemba 5, 2021
7x ngeveki Disemba 3, 2021
1x ngeveki Disemba 19, 2021
IVancouver - iMaui ** 7x ngeveki 3x ngeveki Oktobha 31, 2021
14x ngeveki Oktobha 31, 2021
7x ngeveki Oktobha 31, 2021
2x ngeveki Disemba 12, 2021
1x ngeveki Disemba 18, 2021
* Iindlela ezintsha zongezwa kwishedyuli yasebusika yeWestJet ekhonza eHawaii. ** Inkonzo ngoku isebenza kwishedyuli yehlobo laseWestJet.